🥇 ▷ Astaanta Dabka: Tilmaamaha Sheekada Saddexda Gole ✅
Astaanta Dabka: Tilmaamaha Sheekada Saddexda Gole
Laga yaabee inaad xallisay astaantii ugu horreysay ee Dabka: Seddex Guri Guri oo aad la yaabban tahay dariiqa uu ku yaal bakhaarka. Ama, waxay noqon kartaa wax cusub oo wax walba ku jira oo waxaad la yaabi kartaa guriga ama dariiqa aad dooranayso. Guri walba ma leeyahay in ka badan hal wado? Ma jiraa waddo aan aad ugu dhowayn guusha aqalka? Sida iska cad, waxaan halkan uga baari doonaa xoogaga wax baabi’iya kuwa doonaya inay wax doortaan, laakiin hage tilmaameedka sheeko ee Dabeecadeena Seddexda Guri waa inuu si fiican ugu socdaa qofkastoo ag dhawaa.
Waxa ugu horreeya ee laga fogaado ayaa ah inay runtii jirto 4AAD Sheeko kale oo ka duwan Dabka Emblem: Saddex Guri. Waxay u muuqataa wax xoogaa la yaab leh iyadoo la tixgelinayo inay jiraan saddex Guri oo keliya, laakiin maahan inaan aad uga xun nahay inaan tirinno. Wadooyinka kaladuwan waa sidan soo socota:
Dayaxa Buluugga ah – Libaaxyo Buluug ah
Dabayl cagaaran – Deer Dahab ah
Ubaxa cagaaran – gorgorka madow
Baraf Qalin – Caano Madoow
Haa, taasi waa sax. Sida lagu sharaxay tusahayaga Tilmaamaha Jidka Saddexda Dabka Astaanta, waxaa jira laba dariiq oo kala duwan oo la heli karo haddii aad doorato Black Eagles House ciyaartaada. Wadada loo yaqaan ‘Crimson Flower Route’ waa waxa kuu saamaxaya inaad laxiriirto meel u dhow Edelgard, marka hadii aad dooratid DPR adoo ku saleynaya awooda uu u leeyahay iskuduwaha ama ujeedo ujeeda, waa inaad gaartaa go’aamada muhiimka ah ee lagu qeexay tusaha Hagaha Sirta ah. Haddii aad sidaa yeeli weyso waxay si toos ah kuugu meeleyn doontaa dariiqa loo yaqaan “Snow Snow way” – iyada oo kaliya lagu marin karo Black Eagles, waxay dhab ahaan kugu xiri doontaa Kaniisadda, ma aha Edelgard iyo Boqortooyada Adrestian. Xaaladaas, tani waxay ahayd khibrad gebi ahaanba khaas ah marka la barbar dhigo wadooyinka Blue Libaaxyada iyo Dahabka Dahabka, kuwaas oo si wada jir ah uga qayb galay hogaamiyayaashooda aqalka.
Haddii aad wali ku jirtid xayndaabka wadada aad dooranayso, waxaa fiicnaan laheyd inaad ogaatid in wadada Verdant Winds (Wadada Claude) ay leedahay dhamaadka kaladuwan oo ku saabsan jidadka Dimitri iyo Edelgard. Dhab ahaantii, waxaa jira hoggaamiye dhammaad leh oo ka duwan haddii taasi tahay wax aad rabto inaad tixgeliso, iyo dariiqa shaqsiyeed ee Edelgard, Crimson Flower, gaar ahaan wuxuu ka gaaban yahay labada cutub ee kale marka loo eego cutubyada la heli karo, sidaa darteed taasi waxay sidoo kale noqon kartaa qodob. Noqo mid wax u ah ciyaartoy cusub. Waxaan rabaa inaan xasuusto Xaaladaha oo dhan, dariiqyada kaladuwan waxay leeyihiin qayb la yaab leh, iyadoo aan loo eegayn guri aad doonayso inaad ku biirto, laakiin jidka Kaniisadda ayaa ku siin doona waayo-aragnimo aad u kala duwan haddii ay tahay wax adiga ku daneynaya wixii ka baxsan nidaamka. Hadda oo aad haysato Tilmaame-baraheena Dabka Saddexda Gole oo kaa caawinaya inaad doorashada saxda ah samayso, hore u dhaqaaqdo, oo aad guuleysato.